Munaasabada lagu soo dhaweeynayay abaalmarinta la guddoonsiiyay Prof Dufle oo lagu qabtay Muqdisho ‘Sawirro” – Radio Muqdisho
Munaasabada lagu soo dhaweeynayay abaalmarinta la guddoonsiiyay Prof Dufle oo lagu qabtay Muqdisho ‘Sawirro”
Munaasabad lagu soo dhaweeynayay abaalmarinta qaaliga ah ee sanadka 2015 uu machad ku yaala magaalada Blerma ee dalka Talyaaniga, guddoonsiiyay Prof. Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Munaasabadda oo ay soo qaban qaabiyeen ardayda dhigata kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ayaa waxaa ka qeybgalay wasiirro, xildhibaanno, mas’uuliyiinta ururada bulshada, qaar ka mid ah madaxda warbaahinta dalka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay.
Intii ay xafladdu socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay maadeeys ka tarjumaya wax qabadka Prof. Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle, waxaana munaasabadda tix baraanbur ah oo ka hadlaya waxqabadka Prof Dufle ka jeedisay gudoomiyaha ururka haweenka Qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed “Gaballe” .
Gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Banaadir Dr. C/raxman Xasan Cumar ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay munaasadan, isagoo tilmaamay in qofkii bulshada wax u qabta ay muhiim tahay in lagu maamuuso munaasabado noocan oo kale ah.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska C/laahi Colaad Rooble oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in abaalmarinta uu ku guuleeystay Prof. Dufle ay sharaf weyn u tahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed, isagoo tilmaamay in Prof. Dufle yahay nin Qaran oo ku amaanan wax qabadkiisa.
Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Maxamed C/laahi Nuux oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay guusha uu Prof. Dufle u soo hooyay dalkeena Soomaaliya, isagoo ku amaanay jaamacadda Banaadir iyo Prof. Dufle dadaalka ugu jiraan iney soo saaraan dhalinyaro aqoonyahanno ah.
Sawirqaade Farxaan Suleymaan Daahir
Dhageyso Barnamijka Bandhigga Wareysiyada
Madaxweynaha: Dib u heshiisiinta waa in la joogteeyaa